Qingdao JINBEI Machinery Co., Ltd. (ekwabizwa ngokuba Qingdao JBD Machinery Co., Ltd) na inkampani ebanzi zokuhlanganisa uphando lwezenzululwazi kunye nophuhliso, imveliso, izinto ezintsha nobuchwepheshe (thethwano), imveliso kunye nokuthengisa. Thina ndanyula kuphuhliso "nimi umgangatho, ukuphuhlisa kwezobuchwepheshe, amasiko kuqala" kuseloko lasekwayo nkampani. inkampani yethu kuveza kwisixeko esihle Qingdao, Shandong kwiphondo, China.The kwezithuthi lula kwanobuhle ithatha kuthi inzuzo yophuhliso. Kunye nenkxaso eninzi abathengi kunye nabahlobo abaninzi, inkampani yethu ophuhlisa ngokukhawuleza kwaye kwasekwa inkampani iqela kunye nophando lwenzululwazi, ukwenziwa, urhwebo kunye USB.
Ukwandiswa zoshishino kwiimarike
Indalo kunye ezintsha kusoloko ngumoya engundoqo kwinkcubeko JINBEI kaThixo. Ukususela ukusekwa JINBEI, siyaqhubeka emendweni mission lwamandla eluhlaza. Thina akasoloko egxininisa kwizinga eliphezulu, inkunkuma eliphantsi kunye nongcoliseko ephantsi.
Sinikezela enika iingcebiso ezi mfuno zilandelayo.
Umcebisi Technical ukuqalisa isityalo / iprojekthi entsha
Umcebisi yobugcisa kunye nenkxaso ukuqaliswa izityalo & oomatshini nokubeka ngempumelelo
ukuzifunda Technical uphuhliso lwemveliso ezintsha
Nika Uqeqesho Technical
Gqibezela umsebenzi ezintathu uvavanyo ntathu kwisityalo & kumatshini yokunciphisa iindleko zemveliso
Thina ukhetho lokuqala nokubaluleke abaxhasi ezahlukeneyo ngenxa yezizathu ezilandelayo:
network eziphathelene Wide distribution
ngezenzo zokuziphatha zebhizinisi
Enkulu ekwenzeni experiance
Dibanisa: No.15 Guangdong Road, Beiguan industrial Park, Jiaozhou City, Qingdao, China